geogrid Steel-caag ah
Mid ka mid ah geotextile la laba xuub
Laba geotextiles la mid xuub
fiber Long Geotextile nonwoven
tube permeable jilicsan
Nidaamka daaweynta biyaha ingriiska dambe
Nidaamka daaweynta biyaha rô brackish
Capacity waa ka 250LPH in 50TPH
Nidaamka daaweynta biyaha Badda
Nidaamka daaweynta biyaha rô Standard
wax geosynthetics xireyaashaba
Q1: Xaggee shirkadda ku yaal?
A: Shirkadda Our waxa uu ku yaalaa Xi'an, gobolka Shaanxi ee, Shiinaha.
Q2: ku siin karaa tusaale ah noo taraya?
A: Haa, waxaan soo diri kartaa baarka free, laakiin macaamiisha u baahan tahay inaad bixiso xamuulka ah.
Q3: Waa maxay tirada ugu yar ee si?
A: The tiro si ugu yaraan waa 5000 Meter square, laakiin waa lagu gorgortami karo.
Q4: Waa maxay shuruudaha lacagtaada?
Q5: Waa maxay waqtiga dhalmada aad?
A: waqti Production inta badan kharash 3-5 maalmood, awoodda wax soo saarka: 5000-7000 meter square ah maalin kasta.
Rô nidaamka daaweynta biyaha
Waa maxay noocyada ilaha biyaha ma daweeyo?
Reverse ingriiska waa xal daaweynta biyaha haboon in noocyada ugu waawayn ee biyaha water.tap, sidoo kale loo yaqaan ilo degmada, undergroundwater, oo ay ku jiraan biyo brackish, iyo harooyinka. Soocin ugu weyn ee u dhexeeya saddex nooc oo waa content ee nooc kasta Total kala diri adkaha (TDs). Sida caadiga ah ee suulka, Caafimaadka American Association u baahan yahay in biyo la cabbo oo yar yahay 2,000 PPM ingriiska TDS.Reverse waxaa badanaa loo isticmaalaa in deegaanka biyaha tuubada ah si loo yareeyo engegnaantiinna aawadeed, ama burburka shubo biyo ka soo safraya tuubooyin bir ah. Total cunnooyinka adkaha ah kala diri inta badan bartilmaameed u ah biyaha lagu nadiifiyo ee tuubada kaydadka systems.Underground biyaha oo biyo ah inta badan waa brackish, taasoo la micno ah ay ku jiraan tiro badan oo cusbo ah, laakiin aan ku filan in la tixgeliyo biyo cusbo leh. Dhulka waxaa inta badan ku daahir, waayo, warshadaha beeraha, warshadaha macdanta. Dhulka ayaa sidoo kale bartilmaameed u qiimeeyeen ee warshadaha oo weelaysa ah, maxaa yeelay, isku macdanta gaar ah oo inta badan dhadhan ah rafcaanka.
Salt ingriiska dambe biyo (mararka qaarkood loo yaqaan macaaneeynta) waa ka leexdo ee harooyinka ayaa biyo la cabbo oo galay. Biyaha badweynta kor u leeyahay in 45,000 oo ah TDs PPM. The isticmaalka ugu weyn ee macaaneeynta iman biyo siinta meelaha ka maqan sahayda si joogto ah biyo nadiif ah.
Ma pretreatment loo baahan yahay?
Waa arrin aad u muhiim ah in biyo feed la preconditioned in xuubka ka ciyo keenaya xuub failure.The dhicis ilaaliyo waxaa loo dhisay ee wax iska furan oo kuu ogolaanaya in biyo ah si ay u dhex marin, laakiin waxay diiday inay 99% oo ka mid ah cunnooyinka adkaha ah kala diri at dusha sare. The cusbada kala diri yihiin diido biyaha (durdur ah marmar), halkaas oo ay ku saaray in ay baabba '. wax ay ka saareen ka hor fure u tahay daynin nidaamka rô samayn waxa loola jeeday in lagu do.As System rô ay sii shaqeeyaan, ee adkaha ah kala diri iyo ganaax biyo feed ah u muuqdaan in ay ku hamineysay weheliyaan dusha xuub. Haddii cunnooyinka adkaha ah, kuwaas oo loo ogol yahay in la dhiso ilaa, ay ugu danbeyn xaddido marinka biyaha iyada oo loo marayo xuubabka, taasoo keentay in khasaare ah oo dhex. (Awoodda dhex xuubka waxaa caadi ahaan loo yaqaan heerka ka daadanayo, oo waxaa lagu cabiraa galaan halkii aagga xuubka dusha maalintii cagta square.)
waxaa lagama maarmaan ah si aad u hesho falanqaynta biyo ah?
A falanqayn kiimikada faahfaahsan (LSI, SDI, ama CFI) oo biyo ah feed rô waa lagama maarmaan ugu wayn ee aqoonsashada foulants iman kara. Tani waa in ka mid ah qiyaas engegnaantiinna (calcium iyo magnesium), barium, strontium, alkalinity, pH, iyo chlorine. Xogta laga falanqayn kiimikada waxaa loo isticmaali karaa by injineero ka dhigaayo nidaamka si loo ogaado si mug leh u
xuub soo diyaariyeen in labada yareeyo doonaa janjeera ee miisaanka iyo deposit formation iyo kordhiyo ka soo kabashada iyo heerka ka daadanayo.
Maxaa go'aamisa pretreatments saxda ah, waayo, gaar rô ah?
In eray keliya, falanqaynta. il kasta oo biyo ah way ka duwan tahay, oo marna ma ogaan waxa biyo aad ilaa aad u falanqeeyay aad. Falanqaynta biyaha, qiimaha LSI, SDI, ama CFI waxaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo shuruudaha pretreatment saxda ah System rô gaar ah. Tan iyo sahayda biyaha oo aad u kala duwan yihiin hal meel si kale, shuruud kasta pretreatment noqon doonaan kala duwan.
biyo feed ma u baahan tahay in la jilcincy by rô ah?
Ion sarrifka waa hab caan ah oo Jilcinta iyo yaraynta halista formation qiyaasta macdanta dushiisa xuub. Ion sareyso meletariga sarrifka isticmaalaa sodium si uu u bedelo udhigo scaleforming sida calcium, magnesium, barium, strontium, birta, iyo aluminium si looga hortago waxyeelo ay xubno ka xuub. Foomamka sodium ayaa aad u milma cusbada, kuwaas oo diyaar diiday System ingriiska beddeli iyo diyaar ma samayn sameeyaan qolfo macdanta dushiisa xuub. jilciye sodiumcycle A waxaa la cusboonaysiiyay la marmar sodium chloride. regenerant qaatay, oo ay la socdaan jilciye biyo raacinta ah, waa in la saaro in ay baabba '. Waa sababta oo ah taasi beddelkeeda ra'iyi in waxaa lagu talinayaa in codsiyada in ay leeyihiin waxyaabaha biraha dhaadheer ee biyaha loola dhaqmo.
Ma duro acid loo baahan yahay?
Sida xal acidic ma u fiican yihiin xuubka, xal dhamayta si siman dhaawacayso xuub xubno. Acid cirbad lagu daro waxaa laga yaabaa in nidaamka pretreatment rô ah si loo xakameeyo pH iyo in la yareeyo u janjeera baaxad-sameynta biyo feed ah. duro Acid waa tilmaamay haddii janjeera in qiyaasta la xirrira of il marmar ah waa kor +0,3 sida lagu qiyaasay LSI ah. Ama sulfuric ama Aashito waxaa loo isticmaali karaa ujeedadaas.
Maxay antiscalant ah samayn?
Antiscalants ayaa la muujiyey inuu wax ku ool ah u kordhiyay mudada u dhexeeya nadiifinta kiimikada ee xuubka rô. Waxyaabahani waxaa guud ahaan la diyaariyey in ay ka mid phosphates imanba, organophosphates, iyo dispersants. Antiscalant Qaar ka mid ah waxaa ku jira polymers xun lagu soo eedeeyay iyo in dispersants dhici karta inay polymers cationic laga yaabaa in la isku duraa ilaa durdurka ka hor filtarrada warbaahinta. Antiscalant waa in uu la jaan polymers kuwan; haddii kale, wax soo saarka dareen ku qastaan ​​doonaa xuubabka.
Ma nidaamyada oo dhan waxay u baahan yihiin nadiifinta kiimikada?
In kasta oo dhammaan dadaalada nidaamka ka ciyo ilaaliyo iyo lumiyaan dheecaan, ugu danbeyn xuubka u baahan doontaa nadiifinta kiimikada. A nidaamka rô welldesigned ka mid noqon doona qodobada nadiifinta a taraarax si loo fududeeyo habka nadiifinta. taraarax waa in ka mid ah taangiga kiimikada, kululeeyaha xal, bamka recirculating, bulaacadaha, tuunbooyinka, iyo xidhiidh kale oo dhan iyo qalabka loo baahan yahay dhammaynaya nadiifinta kiimikada dhamaystiran oo modules rô ah.
A-1402, Lvdi Soho NO.6, Zhangba 1aad Road, High Tech-Zone, Xi'an, Shaanxi, Shiinaha
Mobile & Dhadkan app: + 86-15877553984